अध्यक्ष या प्रधामन्त्रीमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान, ओलीलाई अझै अप्ठेरो – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
अध्यक्ष या प्रधामन्त्रीमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान, ओलीलाई अझै अप्ठेरो
Former Prime Minister K.P Sharma oli and other party Leaders participate inaUML Politburo meeting at Dhumbarai Kathmandu on Thursday, February 16, 2017. Photo: Dinesh Gole/Nagarik/Republica
By डिजिटल खबर Last updated May 6, 2020 11 0
२४ बैशाख, काठमाडौं । बैठक माग गर्ने स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टी केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष या प्रधामन्त्रीमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्ने भएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अलग्गै भेला गरेर उनीहरूले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको वैधानिक अवधारणालाई अघि बढाउने भएका हुन् । स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्ने २० जना सदस्यहरूको मङ्गलबार सामूहिक बैठक बसेको थियो ।
बैठकले मूलतः अध्यादेश प्रकरण, कोरोना महाव्याधि र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टीका हरेक निकायमा लागु गर्न दबाब दिने निचोड निकालेको बताइएको छ । “पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको वैधानिक व्यवस्थालाई तलदेखि माथिसम्म लागु गर्नुपर्छ । हामीले बैठकमा यही कुरा उठाउँछौं,” भेलाको पुष्टि गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बाह्रखरीसँग भने ।
“पार्टी एकतालाई बचाउने कुरा भयो । हामी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई भेटेर पनि आफ्नो कुरा राख्छौं । अहिले पार्टी फुट्नु हुँदैन । दुवै छाड्नुस् भन्दा कि उहाँ बस्नु भएन, कि हामी बस्नु भएन । उहाँले पार्टी अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ । समस्याको जड प्रधानमन्त्री नै भएकाले उहाँले नै निकास दिनुपर्छ,” भेलामा सहभागी अर्का हस्ताक्षरकर्ताले बताए ।
स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पनि पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पद (मुख्य जिम्मेवारी) प्रभावकारी हिसाबले लागु गर्नुपर्ने बताए ।
“एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा आइराखेको छ । हिजोदेखि नै उठिरहेको छ । अहिले मिलेर जाने कुरा आयो नि त, प्रधानमन्त्रीले गल्ती महसुस गर्दै आत्मालोचना गरिसकेपछि केही चिजहरू त मिलाउनुपर्‍यो,” गजुरेल भन्छन् । एक व्यक्ति एक पदको कुरा लागु गर्नुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्री तरङ्गित हुन पुगेको उनी बताउँछन् । “एक व्यक्ति एक पदको तरङ्ग हो । मिलेर जानुको विकल्प छैन,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली सहमतिबाट पछाडि हटे राजनीतिक कोर्ष अर्कैतिर जाने गजुरेलको निष्कर्ष छ । सहमतिको पालना नै अहिलेको निकास भएको उनको मान्यता छ । हिजोको भेलामा कोरोनाको महाव्याधिमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
“कोरोना महाव्याधिको दीर्घकालीन असर पर्नेवाला छ । सरकार हचुवातालमा हिँडिरहेको छ । लकडाउन कारण असर परेकालाई के गर्ने ? बेरोजगारी समस्या झन् चर्केर आउनेवाला छ त्यसलाई के गर्ने ? खेतीबालीको मौसम सुरुभयो, बीउ, बीजन, मल चाहियो, कृषि उपकरण, औजार कहाँबाट ल्याउने ? स्थायी कमिटीको बैठकमा यिनै विषय उठाउँछौं,” गजुरेलले भने ।
दोस्रो, अध्यादेश प्रकरण बैठमा प्रखर रूपमा उठाइने गजुरेलले बताए । “प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश किन ल्याउनुभयो ? गल्ती थियो कि, अथवा ठीक हो कि ? प्रधानमन्त्रीले अहिले पनि महसुस गर्नुभएको छैन । उहाँहरूले अहिले पनि साथीहरूले बुझेनन् भनिराख्नुभएको छ, त्यसो भए उहाँले बैठकलाई बुझाउनुपर्छ,” गजुरेल भन्छन् ।
अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जवाफ आउनुपर्ने गजुरेलको मत छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बैठकमा कसरी अगाडि बढ्ने, के कुरा उठाउने भनेर सामान्य छलफल भएको बताए ।
“स्थायी कमिटीको बैठक हामीले माग गरेका हौं । हामी मागकर्ता भएपछि विषयहरू लैजानुपर्‍यो । त्यही स्थायी कमिटी बसेका थियौं । छलफल जारी छ,” उनले भने । एक व्यक्ति एक पदको उठानकर्ता माधवकुमार नेपाल हुन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्ज पनि बनाइएपछि उनले अलग्गै भेला राखेर दोहोरो जिम्मेवारी बाँडफाँड नमान्ने बताएका थिए ।
गत भदौ ३ गतेको नोट अफ् डिसेन्टमा पनि नेपालले एक व्यक्ति एक पदको मान्यता अघि सारेका थिए । २०७५ पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यो कुरा प्रखर रूपमा आएको थियो । त्यतिबेला वामदेव गौतमले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन हुनुपर्ने भन्दा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अघि सारेका थिए ।
दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढेपछि पुनः एक व्यक्ति एक पदको माग ब्युँतिएको हो ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बिहीबार बस्दैछ । स्थायी कमिटी बैठकको तयारीका लागि बुधबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।
सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा दुई अध्यक्षबीच फेर मनमुटाब बढेको छनक पाएको स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । मंसिर ४ गतेको सचिवालयको निर्णयबारे प्रस्ताव तयार पार्ने सन्दर्भमा उनीहरूबीच मत बाझिएको स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
“अध्यक्ष ओली आफूमा निहित कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिन चाहिरहनुभएको छैन । शनिबारको सचिवालय बैठकमा त्यही समझदारी भएको थियो । सहमतिअनुरूप प्रस्ताव तयार पारौं भन्दा उहाँ पुरानै अवस्था फर्कनुभयो, हिजोदेखि वातावरण धमिल्लिएको छ,” एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने ।
CPN UMLDigital KhabarNepalNewsUML Politburo Meeting
मकवानपुरमा पहिरोले पुरि, मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
अस्थायी पोष्टमा तस्कर समूहद्वारा आक्रमण